စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - Panasonic
URL:https://www.panasonic.com.mm https://www.panasonic.com/mm (the "Web Site") များကိုအသုံးပြုပါက သင်အနေဖြင့် Website တွင်ဖော်ပြထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒနှင့် ယခုဖော်ပြထားသော ဝက်ဆိုက်ဒ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိုပါ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို Panasonic Asia Pacific Pte., Ltd အနေဖြင့် ပင်မကုမ္ပဏီ၊ ကုမ္ပဏီခွဲများနှင့် အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူများမှ ပူးပေါင်းချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သင်သည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေဖြင့် လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
1.1 သင့်အနေဖြင့် website ကို အသုံးပြုပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းဥပဒေသများနှင့် အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ယူဆသတ်မှတ်ထားပါသည်။
2. မူပိုင့်ခွင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပို်င်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများ
2.1 ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်များ(ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်များ - သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဆော့ဝဲလ်၊ ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များနှင့် အသံများမပါဝင်ပါ) သည် Panasonic နှင့် ၄င်းကို ထောက်ပံ့ပေးသူများနှင့် လိုင်စင် Third Party များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် Website ပေါ်ရှိအမှတ်တံဆိပ်နှင့် အားလုံးသော content များသည် Panasonic ၏ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများပင်ဖြစ်သည်။
2.2 သင့်အနေဖြင့် Website ပေါ်ရှိ မည့်သည့် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အားလုံးသော content များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း နှင့် အခြားနေရာများတွင် အလွဲသုံးစားပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လုံးဝမပြုလုပ်ရပါ။ စီးပွားရေအရ အသုံးပြုခြင်းများလည်း မလုပ်ရပါ။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့ တရားမဝင် အသုံးပြုခြင်းကို တွေ့ရှိရပါက မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေသများ၊ နှင့် အခြားသောဥပဒေသများအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
3.1 သင့်အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် ညှိစွန်းသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ခြိမ်းခြောက်သော အစရှိသည့် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သော အရာများကို လွဲပြောင်းခြင်း၊ တင်ခြင်းများပြုလုပ်ပါက သင့်အား ဥပဒေချိုးဖောက်သူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မမှန်မကန်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လည်း တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
4. တရားမဝင် link ချိတ်ဆက်ခြင်း
4.1 Website မှ အခြားသော third Party("Linked Sites”) များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော link များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ထားသော Link များကိုလည်း ကြော်ငြာများ၊ အကျိုးစီးပွားဖြစ် အသုံးပြုမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ အရေးယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။
4.2 ချိိတ်ဆက်ထားသော site များတွင် အသီးသီး သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေသများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလတ်များထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒ များပါဝင်ပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤကဲ့သို ချိတ်ဆက်ထားသော link များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက မူဝါဒ၊ သတိပေးစာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပါ။
5.1 Web Site ပေါ်မှ သင့်ကို ဖော်ပြထားသောအရာများသည့် သင့်ကို လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လုံခြုံသော လုပ်ဆောင်ချက်များမှလွဲ၍ အခြားနေရာများတွင် အာမခံမှုပါရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများတွင် ပါဝင်မှုကို အာမခံထားခြင်းမရှိပါ။ Panasonic နှင့် အခြားသော ပါတီများမှ Website တွင် သင့်၏ အသုံးပြှုမှုပျောက်ဆုံးမှုများနှင့် မသတ်ဆိုင်ပါ။
5.2 Web site မှ download ၊ upload နှင့် အခြားသောအသုံးပြုမှုမှရရှိသော content များကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းသည် သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်ပြိး အင်တာနက်(သို့) Websote မှ သင့်ကို အကြံပေးရုံ(သို့)အချက်အလက်ပေးရုံသာဖြစ်ပြီး သင်လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင်သာ မူတည်ပြီး အသုံးပြုသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
6.1 Website(သို့)ချိတ်ဆက်ထားသော link များပေါ်မှ Content များတွင် inaccuracies (သို့) typographical errors ပါဝင်တတ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် content ကို up-to-date ဖြစ်သည်(သို့) အသစ်ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု အာမမခံပါ။ သို့သော် အသိပေးချက်မပို့ဘဲ အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်း(သို့) ပြောင်းလဲခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ဖက်မှ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်မှုများရှိသော်လည်း သင့် အနေဖြင့် Website အသုံးပြုမှု(သို့) ချိတ်ဆက်ထားသော link များအသုံးပြုမှုအတွက် နှောင့်နှေးခြင်း၊ date များပျောက်ဆုံးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး Panasonic နှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာလူများနင့် ဘဘောတူညီထားမှုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သက်တမ်းကန့်သတ်ချက်သည် သင့်သုံးစွဲသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် အခြားသော ချိတ်ဆက်မှု(အင်တာနက်)ကဲ့သို့သော အစရှိသည့်တို့တွင် ထိခိုက်မှုများသည် ကျွ်နု်ပ်တို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Web Site အတွက် လုံခြုံသောဆောင်ရွက်ချက်များအတွက်သာ တာဝန်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
7.1 သင့်အနေဖြင့် သင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုထားသင့်ပါသည်။ ထိုမူဝါဒနှင့်အညီ သင့်အချက်အလက်များကို လွဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
8.1 ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒ, သည့် သင့်အနေဖြင့် website ကို ပေးပို့သောအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်အလက်များကို သင်ကိုယ်တိုင်တင်ထားသည်မှလွဲ၍ လွဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ထိုသို့ ဆက်သွယ်ထားသော အချက်အလက်များသည် ထုတ်ဝေသွားခြင်းရှိမည်မဟုတ်ဘဲ သင်ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းမှ လုံခြုံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံခြင်းများအတွက်လည်း အာမခံထားခြင်းမရှိပါ။
9.1 ဤအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်း ပေါ်သို့တင်ပြီးလျှင်ပြီးချင်း စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမှ ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆိုပါပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်တို့အပေါ် လက်ခံသဘောတူပြီး ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
9.2 အသုံးပြုမှုကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့ခြင်းကို ရပ်စဲခြင်းတို့ကို (အကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) သုံးစွဲသူထံ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သုံးစွဲသူမှသိရှိပြီးသဘောတူလက်ခံရမည်ဖြစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲရန် ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့် သုံးစွဲသူတွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ကုန်ကျမှု၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။